Germany wants Europe strong again - Modern Diplomacy
According to the German Ambassador, the EU is currently facing “seven challenges”, which Germany will do its utmost to address to maximum efficiency during its presidency in the EU. «The number one is the fight against the coronavirus, cooperation in healthcare», – the diplomat pointed out. Among global challenges, he said, is the economic and social restoration of the European Union after the coronavirus crisis, maintaining good neighborly relations with countries that left the EU (that is, Britain), addressing issues related to climate change, and achieving progress in regulating migration within the EU.
In the near future the EU can be expected to recreate the French-German alliance, which acquires ever more importance in wake of financial and economic crisis caused by the coronavirus pandemic and global upheavals on world markets. «Central Europe welcomed the German-French initiative to set up an EU economic support fund and take measures to overcome the consequences of the crisis, caused by the coronavirus pandemic», – says Manuel Sarrazin, a Bundestag deputy from the Greens, Speaker of the East European policy faction, a member of the Foreign Affairs Committee and the Committee for the European Union. «I believe that the coronavirus crisis paved the way for new alliances between the East and the West and that Germany is now enjoying more trust than before the crisis, as countries are faced with the need to consolidate their efforts in the conditions of an acute crisis», – Manuel Sarrazin points out in an interview published by the German Cicero.